Udi | Gcina A Isitimela
ekhaya > Udi sharir
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu namava amatsha i intshukumisa kakhulu kokuhamba. kunjalo, ngamanye amaxesha emehlweni kubakhenkethi-friendly azilubambi ikhandlela ukuya esibi lokuthenga, kungakhathaliseki yeka. Abantu abatyelela bethenga kwazi oku, kwaye ngethamsanqa uninzi lwezixeko zaseYurophu apho banokuvula khona…
Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uhambo ePortugal, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu
Iingcebiso zikaloliwe kunye neeHacks zeYurophu
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu loliwe Swiss ezingcono eYurophu ngokutsho eBoston Consulting Group. Okokuqala, Swiss azuzwe amanqaku aphezulu nakuba kokushiya umgangatho. I-Swiss lazuza 7.2 ireyithingi iyonke ngenxa 10. ngelixa Denmark, Finlend, kunye Germany yonke iphunyelelwe a 6+ ukukala. phakathi…
Uhambo loLoliwe, Uloliwe eSwitzerland, Ukuhamba eYurophu
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu I-EU icebise ukutyala ngaphezulu kwe- $ 100 yezigidigidi koololiwe ukukhulisa uhambo lwaseYurophu, Le mali iza esinokudibanisa mali karhulumente kunye nawabucala. bebonke, le mali zizonke ziya kudlula € 4.5 billion. Le mali iya kuza ngokusebenzisa iqela mali ebizwa Ixhuma Europe Facility. in…
Uhambo loLoliwe, Ukuhamba eYurophu
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ukuhamba eYurophu ngololiwe yenye kakhulu elihle, bemvelo, neehambo zenkcubeko ehlabathini. Enoba ufuna koololiwe ngqo phakathi kwizixeko ezinkulu yaseYurophu ezifana London omtsha eAmsterdam ngololiwe okanye ufuna uhambo kaloliwe yothando, uloliwe European…